Candy Crush: Olona sivy tapitrisa no milalao adiny telo isan'andro | Androidsis
Eder Ferreño | | Candy manorotoro, Lalao Android
Candy Crush dia iray amin'ireo lalao finday finday tranainy indrindra eny an-tsena. Na eo aza ny taona naha-azo azy, dia mbola fahombiazana hatrany amin'ny mpampiasa. Ankoatry ny famoahana fidiram-bola an-tapitrisany ho an'ny orinasa, araka ny efa hitantsika fa nitranga tamin'ny taona 2018. Mpampiasa an-tapitrisany no manohy milalao ity lalao ity isan'andro isan'andro, satria nanjary mazava tamin'ny antsipiriany vaovao izay nipoitra.
Satria toa misy olona sivy tapitrisa mahery milalao Candy Crush mandritra ny telo ka hatramin'ny enina isan'andro izy ireo eto amin'izao tontolo izao. Tarehimarika izay mamoaka indray ny lohahevitry ny fiankinan-doha mety amin'ny latabatra. Lohahevitra iray izay efa niparitaka tamin'ny lalao matetika ity lalao ity.
Candy Crush dia manangona mpilalao manodidina ny 270 tapitrisa isam-bolana, araka ny nambaran'izy ireo avy amin'ny orinasa mihitsy. Amin'izy rehetra dia misy sivy tapitrisa izay mandany adiny telo farafahakeliny isan'andro isan'andro. Raha misy vondrona kely misy mpampiasa 432.000 eo ho eo mandany adiny enina isan'andro amin'ny lalao. Sary vitsivitsy izay mampiahiahy.
Tsy ny angona ihany no miteraka ahiahy. Araka ny azo fantarina, tamin'ny herintaona dia nisy mpampiasa iray izay nandany 2.600 euro tao anatin'ny iray andro monja tamin'ny fividianana lalao. Naneho ny heviny ny orinasa fa matetika izy ireo dia nandefa mailaka tamin'ny mpampiasa nandany $ 250 isan-kerinandro tamin'ny lalao. Satria te hahalala izy ireo raha tena fividianana na sakafo no tena tadiavina. Amin'ny tranga rehetra, nilaza taminy ny mpampiasa fa manafika ireo hafatra ireo.
Fanambarana sasany izay miteraka fanehoan-kevitra, saingy manazava izany misy ireo mpampiasa izay mety ho andevozin'ny Candy Crush. Ny fandaniana vola be amin'ny lalao iray dia tsy ara-dalàna, mainka izany ao anatin'ny fotoana fohy. Na dia avy amin'ny Mpanjaka aza izy ireo dia milaza fa hanao zavatra tsara dia zavatra iray io.
Tsy hafahafa noho izany ny ny lalao dia manana fidiram-bola an-tapitrisany isan-taona, na dia efa an-tsena an-taonany maro aza. Ireo zava-misy vaovao momba ny Candy Crush ireo dia nametraka teo amin'ny latabatra ny lohahevitry ny fiankinan-doha amin'ny lalao. Ny fahitana ny fihetsiky ny mpampiasa maro, izay mandany adiny enina isan'andro na mandany euro an'arivony dia zavatra mazava io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Olona sivy tapitrisa no milalao Candy Crush mandritra ny telo na adiny enina isan'andro
Inona no atao hoe fananganana antso ary nahoana izy no voaloa?
Ny Huawei P30 dia mihoatra ny firaketana ny varotra P20